Combi Filim wuxuu la kulmay plywood
Hexagon Anti-siibte Filim Plywood soo food saartay
Filimka farta lagu daray ayaa lakulmay bunni plywood ah
Filimka 'Poplar Film' wuxuu la kulmay plywood
Filim-diidmo-xumo-diidmo ah oo Plywood soo food saartay
1. Miisaan khafiif ah, oo ku habboon dhismayaasha dhaadheer iyo dhismaha buundooyinka.
2. Ku habboon in la jiido filimka, kaliya 1/7 ee caaryada birta ah.
3. Samee shubka fool-ka-foolka ah: dusha sare ee shayga la shubay waa mid siman oo qurux badan, marka laga jaro habka wax lagu miiro ee darbiga, wuxuu si toos ah u qurxin karaa dharka, isagoo yareynaya muddada dhismaha 30%.
4. Iska caabinta daxalka, wasakh la’aan dusha sare ee shubka.
5. Waxqabadka kuleylka kuleylka wanaagsan, oo ku habboon dhismaha xilliga qaboobaha.
6. Waxaa loo isticmaali karaa sidii shaabad qaabeed.
7. Shaqo wanaag. Ciddiyaha, miinshaarka iyo waxqabadka daloolintu waxay ka fiican yihiin alwaaxda bamboo iyo wasakhda birta yar yar. Waxaa looga baaraandegi karaa tusaalooyin qaabab kala duwan leh iyadoo loo eegayo baahiyaha dhismaha.
Filim-mesh Anti-sibiibix Filim soo foodsaarayso Plywood
Marka loo eego nooca wajiga / dhabarka, qoryaha wajiga xuubka u-qaybsan waxaa loo kala qaybin karaa plywood-xuub-wajiga-xuub-siman ah iyo mid aan-siibiil ah oo xuub-wajiga-wajaha ah Plywood-ka derbiga ah ee aan sibibixda ku leenahay wuxuu leeyahay lakab filim fenolic duug ah oo u adkaysta dusha sare, kaas oo kiimiko ahaan ugu xiran dusha sare isagoo kululeynaya oo riixaya. Qoryaha dusha sare ee filimka lidka ku ah waxaa badanaa loo isticmaalaa inay yihiin alaab dabaq ah oo loogu talagalay gawaarida.
Filimka farta leh ayaa wajahay plywood madow
1. plywood-ka dib loo warshadeeyay ayaa ah nooca badeecada ugu raqiisan boodhka shaashadda caalamiga ah.
2. Waxaa loo isticmaali karaa 2-4 jeer xaaladaha caadiga ah.
3. Plywoodka la isticmaalay u rogo plywood cusub, adoo keydsanaya kheyraadka / keynta.
Sulong plywood kaliya waxay isticmaashaa plywood gacan labaad si taxadar leh loo xushay si loo hubiyo tayada xudunta.
4. Sulong plywood waa horay loo sii farsameeyay, iskuday inaad nadiifiso qashinka la taaban karo ee gudaha ah, waxaa jirta 90% fursad ah in aan la jeexin doonin.
Hayso shahaadada CE iyo ISO
Filim: Filim maxalli ah / filim la soo dhoofiyay, nooca aan warqadda lahayn.
Midab: filim madow, filim bunni ah, filim cagaaran, filim cawl, filim cas, midab madow, midab casaan,
Waxyaabaha muhiimka ah: poplar, corewood hardwood, core eucalyptus, bjchr ama udub-dhexaadka isku dhafan. Gali xudunta
Xabagta: WBP melamine xabagta ama WBP phenolic xabagta. WBP melamine xabagta ama WBP phenolic xabagta
Dib u isticmaal badan
Waxqabadka biyaha / WBP ee sarreeya
Nidaamka gaarka ahi wuxuu baabi'inayaa dildilaaca ku dhex jira xudunta.
Loo habeeyay iyadoo loo eegayo shuruudahaaga
Soo-saarista warshad xirfadeed sannado badan!
Filimku wuxuu wajahay plywood cas
Plywood-darajo warshadeed waxay ka dhigan tahay inay jiri doonaan calaamado duudduuban, qashin dhinac ah iyo xoqitaanno aad u fudud dusha sare.
Plywood Phenolic, filim soo wajahay plywood, plywood cusbi phenolic, xuddun bj birrk Baltic
Meel waara, oo siman, si fudud loo nadiifiyo oo aan lahayn ur aan udgoon lahayn, oo ku habboon cuntada leh geesaha qaabdhismeedka iyadoon wax dabool lahayn
Araajida: Furniture and armaajo, alaabta carruurta, alaabada alwaaxda, miisaska dusha dheer, makhaayadaha, wax taaj oo kale ka samaysan, qalab iyo qalab.
Hayso shahaadada CE iyo ISO.
Filimka farta lagu daray ayaa lakulmay casaan plywood ah
Badeecadani waa 1/8 x 12 x 12 plywood bjchrk
Ku habboon oo fudud in la isticmaalo
Badeecadani waxay ku jirtaa Shiinaha
Plywood laba-geesood ah, fursado isku dhafan oo aan xadidnayn
Kudar qaab kuu ah inch kasta oo ka mid ah
Badeecadani waxay ka kooban tahay 12 x 12 x 1.27 CM (qiyaas qiyaas ah) plywood farsamo
Aad ugu habboon dhammaan noocyada farsamada gacanta
Waxyaabaha loo yaqaan 'bj birrk' waxay leeyihiin cimri dherer, adkeysi iyo xasillooni.
Ma jiraan xargo ama baro. Si fudud loo gooyo, loo dheelo, ciid iyo ranji.
Plywood-ka wanaagsan ee miinshaarta lagu rogo sidoo kale wuxuu leeyahay xabag aad u fiican iyo awood hagaajin ah oo dusha sare ah.
Isku-darka Filimka Isku-darka Plywood
Filimku wuxuu wajahay plywood Eucalyptus madow
Plywood-ka soo foodsaaray filimka waxaa badanaa laga isticmaalaa goobta dhismaha. Sidaa darteed, plywood-ku-dahaarka filimka waxaa sidoo kale loo yaqaannaa plywood-daboolan, qaab-dhismeedka la taaban karo, iyo qaab-dhismeedka la taaban karo ee shubka ah. Sababtoo ah adeegsiga dhamaadka, macaamiisha badanaa waxay ubaahan yihiin WBP plywood-ka filimka lagu daboolay, taas oo aad ugu habboon xirmooyinka mashaariicda waaweyn. Laakiin sidoo kale waxaa jira macaamiil qaar ka mid ah oo u baahan MR filimka lagu daboolay filimka, kaas oo loo isticmaalo indhoolayaasha mashaariicda guud.
Filimku wuxuu wajahay plywood Birch brown